ब्रिस्बेनमा भारतीय टोली माथि कडा नियम – Talking Sports
ब्रिस्बेनमा भारतीय टोली माथि कडा नियम
अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको भारतीय क्रिकेट टोली चौथों तथा अन्तिम टेस्टका लागि ब्रिस्बेन पुगिसकेको छ । तर ब्रिस्बेन पुग्ने बित्तिकै भारतीय टोली माथि अष्ट्रेलिया सरकारले कडा नियम लगाएको छ ।
आफ्ना खेलाडीहरुको चोटका कारण दबाबमा परेको भारतीय टोली माथि लगाइएको कडा नियमका कारण थप दबाब बढेको छ । भारतीय टोलीले चौथों टेस्ट नसकिए सम्म आफ्नो होटलमा रुम सर्भिस पाउने छैनन् ।उनीहरुले आफ्नो ओछ्यान आफै मिलाउन पर्ने हुन्छ भने आफ्नो कोठाको शौचालय आफैले सफा गर्न पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै उनीहरुले पौडी पोखरीको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् भने होटलको कुनै पनि ठाउँमा जानका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उनीहरु आफ्नो टोलीका सदस्यहरुको कोठामा भने जान पाउने छन् । भारतीय टोलीले आफु बसेको होटलमा खाना मगाउन पाउने छैनन् । खाना मगाउन परेको खण्डमा उनीहरुले एप मार्फत खाना मगाउन पाउने छन् ।
भारतीय टोलीलाई होटलको कोठा र गाबामा मात्र आउजाउका लागि खुकुलो गरिएको छ । यो सबै कोरोनाका कारण भएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारको नियम अनुसार कुनै पनि व्यक्ति सिड्नीबाट अन्य कुनै ठाउँमा जान्छ भने उसले १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बिताउन पर्ने हुन्छ ।
तर भारतीय टोलीले १४ दिनको क्वारेन्टिनमा बिताउन नसक्ने जनाए पछि त्यस नियममा खुकुलो पार्दै क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने भए पनि अन्य कुरामा भने कडाई गरिएको हो । भारतीय टोलीका सदस्यहरुमा कोरोनाको खतरा बढ्न सक्ने भन्दै अष्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्डले यस्तो नियम लगाएको हो । त्यस्तै खेलाडीहरुमा कोरोना लाग्ने डरका कारण टोली बस्ने होटलमा पनि अत्यावश्यक कर्मचारी बाहेक अन्यलाई होटलमा बस्ने अनुमती दिइएको छैन ।
क्रिकेटमा सबैभन्दा भारी ब्याट प्रयोग गर्ने ५ ब्याट्स्म्यान
लामो समयपछि पुनरागमन गर्दै ब्राजिलियन सुपरस्टार नेमार
एन्फाको १९ औँ साधारण सभा सम्पन्न, मनोनयनको ब्यवस्था खारेज
ढँग नभएका क्रिकेट पदाधिकारीको हैकमवादी शैली
लुम्बिनीको जितमा सन्दिप, सौरभ, अनिल र बिक्रम नायक
कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो जित
भारतको टेस्ट इतिहासकै उत्कृष्ट जित, लगभग दोश्रो रोजाईको टोलीसँग अष्ट्रेलिया हार्यो
मिलानको जितमा दुवै गोल ज्लाटन इब्राहिमोभिचको
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को मंङ्गलबार १९ औँ साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । २०७६ मा कोरोनाका कारण रोकिएको साधारण सभा यो बर्ष गरिएको हो ।
एन्फाले साधारण सभा मार्फत मङ्गलबार पदाधिकारी मनोनयनको ब्यवस्थालाई पनि खारेज गरेको छ । एन्फा साधारण सभाले संघमा मनोनयनको ब्यवस्थालाई खारेज गर्दै २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति बनाउने निर्णय समेत गरेको हो । अर्को साधारण सभाको कार्यसमितिमा संशोधित विधान लागु हुने एन्फा प्रवक्ता किरण राइले बताएका थिए । यस्तै निर्वाचनबाट आउने २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिमा २ जना महिला सदस्य हुनै पर्ने छ ।
राष्ट्रिय लिग सहितका एन्फाको ८२ करोड ६६ लाख ४२ हजार रुपैयाँको वार्षिक कार्यक्रमलाई पनि साधारण सभाले पारित गरेको छ । एन्फाले साधारण सभा मार्फत आफ्नो आर्थिक वर्षको खर्च र आम्दानी पनि निकालेको छ । प्रवक्ता राइका अनुसार एन्फाको अघिल्लो वर्षको खर्च ४१ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने आम्दानी ४० करोड २६ लाख रहेको छ ।
यस्तै एन्फाले यही वर्ष चैतदेखि २०७८ वैशाखसम्म राष्ट्रिय लिग आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो पटक निकालेको २०७८ को वार्षिक क्यालेन्डरमा राष्ट्रिय लिग नभए पनि छलफल गर्दै २०७८ मा राष्ट्रिय लिग गर्ने एन्फाले बताएको हो । एन्फा साधारण सभाले २०७७ को बाँकी प्रतियोगिताको साथै २०७८ को वार्षिक क्यालेन्डर समेत साधारण सभाबाट पारित गरेको छ ।
यस्तै एन्फालेमनाङ, खोटाङ र नवलपरासी सुस्ता पूर्व जिल्लाहरुलाई पूर्ण एन्फा सदस्यता प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।
नेपालसँगै बिश्व खेलकुदले नै बसालेको संस्कृति हो पोस्ट म्याच कन्फेरेन्स । कुनै पनि खेल समाप्तिपछि पत्रकारहरुले सहभागिता जनाएको टोलीका कप्तान, राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडी वा प्रशिक्षकको प्रतिकृया लिने काम पोस्ट म्याच कन्फेरेन्समा हुन्छ । यसको बिशेष महत्व छ किनभने यसले पाठक, श्रोता वा दर्शकलाई खेलको परिणामबारे अझै नजिकबाट बिश्लेषण गर्ने मौका मिल्छ ।
नेपालमा भएका घरेलु अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरुमा पोस्ट म्याच कन्फेरेन्स संस्कृति लामो समयदेखि स्थापित हुदै आएको छ । र यसको रौनक पनि छुट्टै हुने गरेको छ ।
तर मङ्गलवार प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको गण्डकी र कर्णाली प्रदेशबीचको खेलपछिको पोस्ट म्याच कन्फेरेन्स पत्रकारहरुले नसोचेकै हुन पुग्यो ।कारण थियो क्रिकेटका एक पदाधिकारीले आफ्नो सिमा मिचेर पत्रकारितामाथि बोलेको धावा ।
खेल समाप्तिपछि म लगायत अन्य पत्रकारहरुले कर्णाली कप्तान रविन्द्र जँग शाहीको अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि कर्णालीका बिदेशी प्रशिक्षक पउल फरेरोको अन्तर्वाता लिन शुरु गर्यो । कर्णालीले प्रदेश संरचनामा गइसकेपछि राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो जित हात पार्दा फरेरोको भुमिका पनि मुख्य रहेको रविन्द्रले बताएपछि उनको अन्तर्वार्ता पनि महत्वपूर्ण हुने हामीलाई लागेको थियो ।
रविन्द्रलाई नै आग्रह गरेपछि फरेरो अन्तर्वार्ता दिन उत्सुकतापुर्वक नै उपस्थित भए । सुर्खेतमा तीन बर्ष देखि कफि खेति गर्दै कर्णालीको क्रिकेटसँग नजिक भएका दक्षिण अफ्रिकी फरेरोले आफ्नो देशमा बि डिभिजन क्रिकेट खेलेका रहेछन् । उनले निस्वार्थ भावनाले नै त्यहाको क्रिकेटमा मद्दत गर्दै आएका रहेछन् । उनले सबै प्रश्नको जवाफहरु उत्साहित भएरै दिइरहेका थिए ।
पाचौं प्रश्न सोध्दा एक व्यक्तिले सिधै हस्तक्षेप गर्दै डोमिनेट गर्ने शैलीमा हामीलाई भनेः “प्रश्न गर्या गरै नगरौ न उसलाई पनि टाइम दिउ है । कति वटा प्रश्न भयो ? १० वटा प्रश्न भयो ?”
ती व्यक्ति अजय बिर पाण्डे रहेछन् । बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको केन्द्रिय सदस्य । उनलाई हामीले बिगत एक दशकदेखि कहिल्यै पनि क्रिकेटको कुनै पनि पोस्ट म्याच कन्फेरेन्समा देखेका थिएनौं । उनको भुमिका त्यहा के थियो हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन ।
अन्तर्वार्ताको दौरान कहिल्यै रोकटोकको सामना नगरेका हामीलाई निकै अप्ठ्यारो महसुस भयो र सिधै क्यामेरा बन्द गर्यो । एक बिदेशी नागरिक र हामीसँगै पछाडी उभिएर सुनिरहेका खेलाडीहरुको बीचमा डोमिनेट गर्ने शैलिमा प्रस्तुत भएपछि हामीलाई अपमान भएको महसुस हुँदा हामीले सिधै क्यामेरा बन्द गरेका थियौं ।
आफूलाई एन्टी करप्सन युनिटको सदस्य भएको बताएका पाण्डेले त्यहा अपमान गर्ने आशयले नै व्यहार गरेको देखेपछि मैले ‘तपाईले यसरी अन्तर्वार्ता लिइरहेको समयमा हामीलाई रोक्न मिल्दैन’ भनेपछि उनी अझै डोमिनेट गर्ने मनसायले बोल्न थाले ।
शुरुमा प्लेयिङ्ग एरियामा अन्तर्वार्ता लिएको बहाना बनाउन खोजेका उनले हामी बाउण्डरी लाइन बाहिर पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसन हुने ठाँउमै उभिएको देखेपछि अन्य बाहना खोज्न थाले । बाउण्डरी लाइन भित्र भने अरु दुई ठाँउमा छुट्टै अन्तर्वार्ता चलिरहेकै थियो । पाण्डेले कहिले खेलाडीलाई खेलपछि समय चाहिएको त कहिले फरेराले उत्सुकतापुर्वक अन्तर्वार्ता दिएको देख्दा देख्दै पनि उनी थाकिसकेको भन्न थाले ।
हामीले ‘यदि म दिन्न भन्छन् भने हामी कसैलाई पनि अन्तर्वार्ताका लागि कर गर्दैनौं , उनी आफै तैयार भएका हुन्भ’ भन्दा भन्दै पनि पाण्डेको शैलि उस्तै थियो । पछि ‘म तपाईहरुको मिडिया म्यानेजरसँग कुरा गर्छु’ भन्दै फोन पनि झिक्दै चलाउन थालेका थिए ।
पाण्डेसँग बादविवादमा उत्रनु उचित नहुने देखेरै उनको प्रवृति बारे समाचार लेख्नै पर्ने भयो भनेर फोटो खिच्न लाग्दा उनले अर्का पत्रकार सुबास हुमागाईलाई ‘ल खिच्नुस, हेडसट आउने गरि नै खिच्नुस भन्दै मास्क उतार्दै’ उल्टै चुनौति दिन थाले ।
अन्य ठाँउमा अन्तर्वार्ता चले पनि नियमसंगतले नै बाउण्डरी लाइन बाहिर एक बिदेशी नागरिकको अन्तर्वार्ता भएको ठाँउमा उनले किन हस्तक्षेप गरे ? जबकी उनलाई दिइएको काममा यो पर्दै पर्दैन । मैदानमै अन्य पदाधिकारीले उनलाई सम्झाउन खोज्दा पनि पाण्डेमा कुनै ग्लानी भावना देखिएन । उनले धेरै लामो बाद बिवादपछि मात्रै आफूलाई ज्ञान नभएको स्विकारेका थिए ।
बिदेशी नागरिकको अगाडी गरिएको त्यो व्यवहारले उल्टै हामीलाई नै ग्लानी त भयो नै सँग–सँगै आफ्नो पेशालाई लिएर भएको अपमान दुःख लाग्दो थियो ।
सन्दिप रजाली र सौरभ खनालको अद्र्धशतकसँगै स्पिनर अनिल खरेलले चार विकेट लिएपछि लुम्बिनी प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा बिजयी शुरुवात गरेको छ ।
त्रिवि मैदानमा लुम्बिनीले मङ्गलवार प्रदेश २ लाई ७७ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो । टस जिति पहिलो ब्याटिङ्ग गरेको लुम्बिनीले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउदै २ सय ५७ रन बनायो । जवाफमा प्रदेश २ ४२ दशमलव ४ ओभरमा १ सय ८० रनमै समेटियो ।
माथिल्लो अर्डरले मध्यम प्रदर्शन दिदा प्रदेश २ ले २५ औं ओभरसम्म मात्र दुई विकेटको क्षतिमा १ सय ५ रन बनाएको थियो । तर अमित तामाङले भेटेरान अलराउण्डर महबुब आलमलाई पेभिलियन फर्काएकासँगै प्रदेश २ ले अर्को ७ विकेट मात्र १९ रनमा गुमाएको थियो ।
यस क्रममा अनिलले चार विकेट लिएका थिए । निकै कसिलो बलिङ्ग गरेका अनिलले १० ओभरमा २९ रनमात्र खर्चेका थिए । आठौं नम्बरमा ब्याटिङ्ग गर्न आएका बिबेक यादवले केही आकर्षक शटहरु खेल्दै अद्र्धशतक बनाएपछि प्रदेश २ केही हदसम्म सम्मानजनक योगफलसम्म पुगेको थियो ।
बिबेकले अन्तिम विकेटका लागि दिभ्यान्सु मल्लिकसँग ५६ रनको साझेदारी गरेका थिए । ४९ बलको सामना गरेका बिबेकले तीन छक्का र तीन चौका प्रहार गर्दै बिक्रम भुषालको बलमा आउट भए ।
लेग स्पिनर बिक्रम र अर्का आशा लाग्दा बाया हाते स्पिनर दिपेन्द्र रावतले पनि २–२ विकेट लिएका थिए । प्रदेश २ का लागि टप अर्डरबाट ओपनर सुधिर चौधरीले ७५ बलमा ४२ रन बनाए भने महबुबले ३१ ब्लमा ३१ रन जोडेका थिए । महबुबले दुई छक्का र एक चौका प्रहार गरे ।
यसअघि पहिलो तीन विकेट ४२ रनमै गुमाएको लुम्बिनीलाई सौरभ र सन्दिपले सम्हालेका थिए । उनीहरुले चौथो विकेटका लागि ९७ रनको साझेदारी गरेपछि लुम्बिनी चुनौतिपूर्ण योगफलतर्फ अग्रसर भएको थियो । म्यान अफ द म्याच सन्दिपले १ सय ७ बलमा ११ चौका प्रहार गर्दै ८३ रन बनाए भने सौरभले ६४ बलमा ५६ रन जोड्दै पाँच चौका र तीन छक्का हिर्काए ।
लुम्बिनीलाई २ सय ५० रन नघाउन काम भने बिक्रमले गरे । ३८ बलमा ३६ रन बनाएका उनले तीन छक्का प्रहार गरेका थिए । प्रदेश २ का लागि हरिशंकर साहले तीन र दिभ्यान्सु मल्लिकले दुई विकेट लिएका थिए ।
गण्डकीको कर्णालीलाई चुनौतिपूर्ण लक्ष्य
औबामेयाङले गोलको खडेरी तोड्दा आर्सनलको अर्को जित
बागमतीको सशक्त प्रदर्शन, सुदुरपश्चिम १ सय ८० रनले पराजित
गण्डकीको प्रधानमन्त्री कपमा पहिलो जित